ADY TANY AO SALAZAMAY ATSIMO 14/22 : « Tsy voahaja ny didim-pitsarana », hoy ny fokonolona · Aponga
Ino Vaovao : Foncier
ADY TANY AO SALAZAMAY ATSIMO 14/22 : « Tsy voahaja ny didim-pitsarana », hoy ny fokonolona
Izay no nambaran’ireto olona an-jatony ireto mitaraina amin’ny didin’ny be sandry atao azy ireo. Mazava ny voalazan’ilay «certificat juridique» nivoaka ny 12 oktobra 2017 teo raha ny angom-baovao, fa «Lazaret» manana ny titra 907-BA ity tany mirefy 04ha iadiana ity ; saingy ao anatin’izay dia misy ampahany mirefy 79A sy 14Sa izay nofain’ity orinasam-pifandraisan-davitra ity tamin’ny orinasa Paositra tompony ary efa nahazoany titra vaovao 9641-BA noho ny fifanarahana teo amin’izy ireo.
Noho izao olana izao dia tonga teny amin’ny fitsarana ny raharaha, ka nahazoan’ireto olona ireto ny «Ordonnance» laharana 1541-AG/17 ny 23 septambra 2017 nahafahan’izy ireo namefy ny tanin’izy ireo avy izay efa voatsiriky ny sampan-draharahan’ny fananan-tany izany sy efa nahazoan’izy ireo laharana ireo antontan-taratasin’ny taniny avy nefa mbola niteraka olana hatrany ny raharaha.
Ny volana desambra 2017 dia nitondran’ity orinasa ity mpiasan’ny fananan-tany sy mpiasan’ny fandrefesan-tany ary «expert geomètre» tsy miankina ilay tany, ka raha avy nandrefy izany izy ireo dia nametraka «borne», ka nahatonga ireto olona ireto nampiditra fanindroany indray ny raharaha teny amin’ny fitsarana, izay nivoahan’ny «ordonnance» laharana 2301-AG/17 ny 20 desambra 2017 nanakana ny fametrahana ireto «borne».
Tsy nisy niraharaha anefa ireo didim-pitsarana ireo fa ny didin’ny be sandry no miasa ka voatery nisy indray ny fampidirana ny raharaha teny amin’ny fitsarana indray. Milaza ny tsy hanaiky hatramin’ny farany anefa ireto vahoaka, ka ahiana ny hisian’ny sakorona tsy ho ela satria hiaro ny fananany «ara-dalàna» ireto fokonolona.
Midi Madagasikara : Foncier
Réformes foncières : Madagascar cité comme exemple en Afrique
News Mada : Foncier
Reforme Foncière : la Mauritanie séduite par le modèle malgache
Gestion foncière… : « un chantier titanesque »
Manjakamiadana : interdiction de construire
Sécurité des frontières : Madagascar se met aux normes internationales
Fisolokiana tanyOlona 3600 no voafitaka
Tsy fanaovana fanambaram-pananana : manampahefana fito no nanaovan’ny Bianco antontan-taratasin’ady